Indlu yanamhlanje ngasechibini 1-2
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguКонстантин
Kufuphi nendawo endihlala kuyo kukho ulwandle, ulonwabo losapho kunye nemibono emihle. Uya kuyithanda, kuba endlwini yam kukho indawo yokuhlala kunye nendawo ekufutshane nendlu. Indawo yam yokuhlala ifanelekile oku: izibini, abahambi bodwa, abahambi bezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), amaqela amakhulu kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana)
I-cottage ifanelekile kumhla wokuzalwa, umtshato, i-christening (itempile yimizuzu emi-5 ukusuka kwindlu), nje iholide kwilizwe.
4.71 · Izimvo eziyi-17
Indlu ibekwe kwindawo yolondolozo lwendalo kwintsimi yanamhlanje, ilali egadiweyo ye-cottage (ilali yaseMyshetskoye, isithili saseSolnechnogorsk). Kumgama wokuhamba ukusuka kwindlu, kukho ichibi elikhulu "Round", ihlathi kunye neTempile endala yekhulu le-17.
Indlu iye yalungiswa ngokweprojekthi yoyilo lombhali (imibhobho yanamhlanje, imigangatho eshushu, ifenitshala entsha). Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, ikhitshi edibeneyo ngefestile kunye neveranda egqunyiweyo. Iveranda egqunyiweyo, enendawo yomlilo (ikuvumela ukuba ukonwabele ngokukhululekileyo umlilo ovulekileyo kunye ne-barbecue nasebusika). Amagumbi okulala abekwe kumgangatho wesibini nowesithathu. Kumgangatho ongaphantsi kwesakhiwo kukho indawo yokuhlambela kunye negumbi eline-tennis yetafile
Izinto zokwakha zendalo zazisetyenziselwa ukuhlobisa, i-staircase yenziwe ngama-mahogany abizayo.
Kukho zonke izixhobo zendlu eziyimfuneko: i-dishwasher, i-oven microwave, iDVD, kunye neetawuli, izitya, ilinen yokulala.
Izindlu zethu zilungiswe kakuhle kwaye zicoceke kakhulu.
Kwakhona, ixabiso libandakanya ukucocwa okupheleleyo (kuquka ukuhlamba izitya), ilinen yelinen, iitawuli kunye ne-slippers.
Umbuki zindwendwe ngu- Константин
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$135